नेपालका कुन नेता कुन रोगबाट पीडित छन् ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिबेला अस्वस्थ छन् । उनको दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडेको छ । चिकित्सकहरुले उनलाई हप्ताको तीन पटक डाइलासिस गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
१० वर्षअघि भारतको अपोलो अस्पतालमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो।
मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि उनले नियमित औषधि सेवन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनको मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि उनलाई डाइलासिस वा मृगौला प्रत्यारोप गर्ने दुई विकल्प रहेका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा
प्रचण्डलाई उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या छ।
झलनाथ खनाल, नेकपा
झलनाथ खनाल राति आँखा देख्दैनन्। उनी अँध्यारो भएपछि सहयोगीबिना हिँडडुल पनि गर्न सक्दैनन्।
मोहन वैद्य, नेकपा -क्रान्तिकारी माओवादी-
मोहन वैद्यलाई दम र रक्तचापको समस्या छ।
शेरबहादुर देउवा, नेपाली कांग्रेस
नेपाली काँग्रेसका अध्यक्ष पेट र उच्च रक्तचापको समस्याबाट शेरबहादुर देउवा लामो समयदेखि पीडित छन्।
रामचन्द्र पौडेल, नेपाली कांग्रेस
उनलाई लामो समयदेखि सुगर, प्रोस्टेट, ढाड र युरिक एसिडको समस्या छ।
माधवकुमार नेपाल, नेकपा
उनलाई मुटु र फोक्सोसम्बन्धी समस्या, रक्तचापको समस्या छ ।
बाबुराम भट्टराई,समाजवादी पार्टी
डा. भट्टराईलाई लामो समयदेखि रक्तचापको समस्या छ।
कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाली कांग्रेस
सिटौलालाई उच्च रक्तचाप, सुगरका साथै खुट्टा झमझमाउने समस्या पनि छ।
उपेन्द्र यादव, समाजवादी पार्टी
उपेन्द्र यादव मधुमेहबाट पीडित छन्।